चौतारीको आइपीओमा थामिनसक्नु आवेदन, दुई दिनमै १७ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड ! Bizshala -
चौतारीको आइपीओमा थामिनसक्नु आवेदन, दुई दिनमै १७ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड !
काठमाण्डौ । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रही विभिन्न १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको चौतारी लघुवित्तले निश्कासन गरेको आइपीओमा दोश्रो दिनसम्म थामिनसक्नु आवेदन परेको छ ।
दोश्रो दिनसम्म यो कम्पनीको आइपीओमा मागभन्दा करिब १७ गुणा बढी आवेदन परेको हो ।
सिडिएससीका अनुसार दोश्रो दिन ६ बजेसम्मको आँकडा अनुसार देशभरबाट १ लाख ५० हजार ३ सय २८ आवेदकबाट ९२ लाख ६२ हजार ७ सय ९० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ ।
यो कम्पनीले आइपीओमा मंसिर २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
chautary laghubittia bittiya sastha ipo oversubscribed